1 O wee ruo n’ụbọchị Ahazuirọs,+ ya bụ, Ahazuirọs nke nọ na-achị dị ka eze malite n’India ruo n’Itiopia, ihe karịrị otu narị ógbè na iri ógbè+ abụọ na asaa,
2 na Eze Ahazuirọs nọ ọdụ n’oge ahụ n’ocheeze ya+ nke dị na Shushan+ bụ́ obí eze,+
3 n’afọ nke atọ nke ọchịchị ya, o meere ndị niile o mere ndị isi oriri,+ tinyere ndị niile na-ejere ya ozi, ndị agha Peshia+ na Midia,+ ndị a ma ama+ na ndị isi nke ógbè dị iche iche bụ́ ndị guzo n’ihu ya,+
4 bụ́ mgbe o gosiri akụnụba+ nke alaeze ya dị ebube+ nakwa nsọpụrụ na ịma mma nke ịdị ukwuu ya ruo ọtụtụ ụbọchị, otu narị na iri ụbọchị asatọ.
5 Mgbe ụbọchị ndị a gasịrị, eze meere ndị niile nọ na Shushan bụ́ obí eze oriri ruo ụbọchị asaa, ma ndị ukwu ma ndị nta, n’ogige dị n’ubi nke dị n’obí eze.
6 E nwere ákwà linin, ogho mara mma na ogho na-acha anụnụ anụnụ+ e ji eriri ákwà ọma kegidesie ike, e nwekwara ákwà e sijiri odo odo+ ndị e kenyere n’ọlaọcha dị okirikiri nakwa n’ogidi mabụl, ihe ndina+ ndị e ji ọlaedo na ọlaọcha rụọ dịkwa na pevment e ji nkume pọfiri na mabụl na nkume pel na mabụl ojii rụọ.
7 E jikwa arịa ọlaedo+ bugharịa mmanya a ṅụrụ; arịa ndị ahụ dịkwa iche n’ibe ha, mmanya eze+ dịkwa ukwuu, dị ka akụnụba eze hà.
8 N’oge a na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ahụ dị ka iwu kwuru, ọ dịghị onye na-amanye ndị mmadụ, n’ihi na ọ bụ ihe eze dokwara maka dike ọ bụla nọ n’ezinụlọ ya, ka onye ọ bụla mee ihe masịrị ya.
9 Vashtaị+ bụ́ nwunye eze mekwaara ndị inyom nọ n’ụlọ Eze Ahazuirọs oriri.
10 N’ụbọchị nke asaa, mgbe obi eze jupụtara n’ọṅụ n’ihi mmanya ọ ṅụrụ,+ ọ gwara Mehuman, Bizta, Habona,+ Bigta na Abagta, Zita na Kakas, mmadụ asaa na-eje ozi+ n’obí eze bụ́ ndị na-ejere Eze Ahazuirọs ozi,
11 ka ha kpọtara ya Vashtaị bụ́ nwunye eze mgbe o keworo ákwà isi dị ka nwunye eze, ka o gosi ndị dị iche iche na ndị isi ịma mma ya; n’ihi na ọ mara mma.+
12 Ma Nwunye Eze, bụ́ Vashtaị, jụrụ+ ịbịa za eze òkù o dunyere ndị na-eje ozi n’obí eze ka ha kpọọ ya. Eze wee wee iwe nke ukwuu, ọnụma ya wee dị ọkụ nke ukwuu.+
13 Eze wee gwa ndị amamihe+ maara ihe ndị mere n’oge gara aga+ (n’ihi na ọ bụ otú a ka okwu eze si abịa n’ihu ndị niile ihe banyere iwu na okwu ikpe doro anya,
14 ndị na-anọkwa ya nso karịsịa bụ Kashina, Shita, Admeta, Tashish, Mires, Masina, nakwa Memukan, bụ́ ndị isi asaa+ nke Peshia na Midia, ndị na-abịa n’ihu eze mgbe niile,+ ndị nọkwa n’ọkwá mbụ n’alaeze ahụ):
15 “Dị ka iwu kwuru, gịnị ka a ga-eme Nwunye Eze, bụ́ Vashtaị, n’ihi na o meghị ihe Eze Ahazuirọs kwuru site n’ọnụ ndị na-eje ozi n’obí eze?”
16 Memukan+ wee kwuo n’ihu eze na ndị isi, sị: “Ọ bụghị naanị eze ka Vashtaị bụ́ nwunye eze mejọrọ,+ kama o mejọkwara ndị isi niile nakwa ndị niile nọ n’ógbè ndị Eze Ahazuirọs na-achị.
17 N’ihi na ihe a nwunye eze mere ga-eru ndị inyom niile a lụ alụ ntị, ha onwe ha ga-eledakwa+ ndị nwe ha+ anya, mgbe ha ga-asị, ‘Eze Ahazuirọs kwuru ka a kpọta Vashtaị bụ́ eze nwaanyị n’ihu ya, ma ọ bịaghị.’
18 Taakwa, ndị nwunye ndị isi Peshia na Midia, bụ́ ndị nụrụ ihe nwunye eze mere, ga-agwa ndị niile eze mere ndị isi okwu otú ahụ, nleda anya na iwe+ ga-ejukwa ebe niile.
19 Ọ bụrụ na ọ dị eze mma,+ ka eze kwuo ya, ka e denyekwa ya n’iwu+ ndị Peshia na Midia, ka a ghara ịgbanwe ya agbanwe,+ na Vashtaị agaghị abatakwa n’ihu Eze Ahazuirọs; ka eze werekwa ọnọdụ ya dị ka nwunye eze nye nwaanyị ibe ya, onye ka ya mma.
20 A ga-emekwa ka a nụ iwu eze ga-eti n’ebe dum ọ na-achị (n’ihi na ọ sara mbara), ndị inyom niile a lụ alụ ga na-enyekwa ndị nwe ha+ nsọpụrụ,+ onye ukwu na onye nta.”
21 Ihe ahụ dịkwa eze na ndị o mere ndị isi mma,+ eze wee mee ihe Memukan kwuru.
22 O wee ziga akwụkwọ ozi+ n’ógbè niile eze na-achị, ógbè nke ọ bụla+ n’otú ha si ede ihe, ndị ọ bụlakwa n’asụsụ ha, ka onye ọ bụla bụ́ di na-eme dị ka onyeisi n’ezinụlọ ya mgbe niile+ ma na-ekwu okwu n’asụsụ ndị obodo ya.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D17%26Chapter%3D1%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl